Pamabhizinesi epaInternet Anoda Kuchinja Kushambadzira Kuti Ugare Mberi Martech Zone
Iko hakuna mubvunzo kuti Internet yachinja zvakanyanya pamusoro pemakore, uye ichokwadi kuti makambani anotengesa sei bhizinesi ravo repamhepo zvakare. Chero chero muridzi webhizinesi anongoda kutarisa huwandu hweshanduko Google yaakaita kune yayo yekutsvaga algorithm kuti uwane kunzwisiswa kwekutanga kwekuti maratidziro eInternet maratidziro zvachinja sei nekufamba kwenguva.
Makambani anoita bhizinesi paInternet anoda kusimudzira marongero avo ekushambadzira nguva dzese panenge paine shanduko mune yekutsvaga algorithms, kana ivo vangangosiiwa kumashure kusvika padanho rekutengesa kwavo vanotambura. Bob Holtzman we Mainebiz.com anozviisa zviri pachena:
"Indaneti inoshanduka nekukasira zvekuti izvo zvakashanda gore rapfuura zvinogona kunge zvakatokundwa - uye izvo zvinogona kutsanangura kushambadzira kwepamhepo kwemakore gumi apfuura. Inguva apo mamwe makambani aive apedzisira kuvaka mawebhusaiti avo ekutanga, vezvenhau vakatanga kutora maziso eziso nekuita iwo ari kumashure-e-curve masaiti kunge ekare kana asina basa.
“VaLatecomers kuFacebook vakazviwana vanonoka kuenda kupati yeTwitter, zvakare. Panguva iyo mamwe mawebhusaiti akatanga kubatanidza vezvenhau, nharembozha dzaive dzichimanikidza shanduko dzakakura pakugadzira saiti, kuvaka, uye zvemukati. "
Parizvino, mabhizimusi epamhepo arikuita shanduko dzakaitika semhedzisiro yeGoogle ichangoburwa, inonzi Hummingbird. Chinangwa cheiyi algorithm shanduko yaive yekuchinja imwe yehuremu kubva kutsvakiridzo yezwi rakakosha kuenda kutsvagurudzo dzekutsvaga dzinotsvaga mhinduro dzemibvunzo yakananga.
Google yataura kuti inoda kusimudzira zvemukati (mawebhusaiti) ayo anokwanisa kupindura mibvunzo yevashandisi, saka zvemukati hazvigone nezve kungosimudzira mutsara wechigadzirwa kana brand. Inofanira kuve chinhu chinoratidzwa sechakakosha kutanga. Kana hwaro uhwu hwave kuvakwa, matekiniki ekushambadzira anogona kuiswa kutenderera yako saiti pasina kunyanyisa kupfuura.
Tora iri peji kubva Cleveland Shutters Semuyenzaniso. Musoro wepeji unoverengwa: Une bay windows? Unoda mhinduro inoshanda here? Pakarepo kubva pabhati, kambani inoratidza kuti iri kugadzirisa nyaya inogona kuva nevaoni.
Zvino chinoita kuti iri peji rive rakasarudzika nderekuti kambani haina kuenda kumadziro hombe ezvinyorwa kutsanangura zvinogona kuitwa nemunhu ne bay bay; yakaratidza mushanyi nhevedzano yemifananidzo inosimbisa mhinduro kuchinetso. Iye munhu anogona kuuya kuzotsvaga mhinduro kwete chete anogona kuwana imwe, asi iye kana iye anogona kuona kuti zvigadzirwa zveCleveland Shutters mhinduro sei pasina kurohwa neyakajairwa kushambadzira.
Iko kukura kuri kuita nhare
Nyanzvi dzinotiwo kuwedzera kwenhamba mbozha kuchave nesimba rakakura pakushambadzira mune ramangwana. "Nzvimbo yekutsvagisa uko kutsvaga kwakawanda kunoitika pane zvigadzirwa zvefoni kupfuura makomputa akamira kuri kuuya nekukurumidza kupfuura vazhinji vanofunga," akadaro Google Injiniya Wekutsvaga Matt Cutts. "Handizoshamiswa kana tikakurumidza kutora nharembozha kumhanya kune SEO."
Nekuda kweizvozvo, mabhajeti anoitirwa nhare dzekushambadzira nhare zvakawedzera zana nemakumi mana nemana kubva muzana kubva mugore ra142 na2011. Zvakawanda izvi zvinotanga neshanduro inoshamwaridzika yewebhusaiti yekambani, iyo inowanzo kufuratirwa nemabhizimusi epamhepo.
“Vafambi vepaMafoni efoni iboka rinoda. Kana vakashanyira webhusaiti yako uye isina kugadzirirwa zvese zvishandiso zvavari kushandisa uye nenzira dzakasiyana dzinoshandiswa nevashandisi venhare, vanozoora moyo vobva vasiya, ”anodaro Ken Barber, mutevedzeri wemutungamiri wezvekutengesa pa mShopper.com.
Nepo mafambiro achizo shanduka, chinhu chimwe Google isina kumbobvira yatsauka kubva kukosha kwehunhu hwemushandisi ruzivo sechinhu chakakosha mukumisikidza mapeji emhedzisiro yekutsvaga. Kupa zvirimo zvakakosha uye nekupa vashanyi, zvese kuburikidza nedesktop uye nharembozha, iine hupfumi, ruzivo rwekuita idzi nzira mbiri dzisingazombofa dzakabuda musitaira.